'The greatfake' ghost ghost 'PsyOp ka qaadida xorriyaddaada oo dhan iyo hordhaca' booliiska fikirka '(qaybta 3): Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 22 Oktoobar 2019	• 10 Comments
Reer guuraaga ah, aabe cirfiid, wiil cirfiid ah. Ghost ghost Ghost waxaa dhawaan laga heli doonaa beerta cirfiidka, maxaa yeelay sheekada cirfiidku waa inay ahaataa mid xiisa leh oo "lagu kalsoonaan karo". Soo bandhigida PsyOp wuxuu soo bandhigayaa fikirka George Orwell boolis iyo inuu awood u yeesho inuu gadaal ka eego albaab kasta oo furan amar maxkamadeed baaris la'aan. Sheekada ayaa maskaxdaada gelisa maalin kasta De Telegraaf; wargeyska oo sidoo kale taageeray nidaamkii fulinayay weerarada '40 /' 45. Sharcigii duulistaasna wuxuu soo noqonayaa maanta.
In sharciga duulaanka uu soo dhowaanayo ayaa si dhakhso leh u caddaatay muddadii ugu horreysay Digniinta nabdoonaanta ku saabsan sheekadan cirfiidka. Janny Knol, oo ah kuxigeenka taliyaha booliska (jinsi lama yaqaan), wuxuu ii sheegay in booliisku ay horay u joogeen beerta xayawaanka maxaa yeelay waxaa jiray shaki laga qabay jiritaanka dhir geed. Laakiin, ayay tidhi, bilaysku ma eegi karin gudaha, maxaa yeelay aabbaha canugga ah uma oggolaanin inuu soo galo. Horeyba waad u ogtihiin in sharci cusub laga shaqeynayo halkan kaas oo meesha ka saaraya caqabad ku noqota albaabka hore, sidaa darteed waxaan sidoo kale u abuuri doonnaa boos lagu soo qaado weerarada waqtiga xaadirka ah. Wareegyo wareeg ah oo qof kasta oo ku dhawaaqa fikrada qalloocan laga soo qaadan karo.
"Ah, Vrijland, miyaadan hadda wax yar sii soconaynin? Sow waxyar oo waalan miyaadan socon?"Weligaa miyaad weydiisay isla su'aal ku saabsan warbixinnada warbaahinta? Miyaad weligaa naqdiyaysaa maareeyayaasha aragtiyaha lacagta qaata iyo kuwa mushaharka qaata, haa, udiyaar garowda martida miiska; Noocyada sida Jeroen Pauw? "Hagaag, mararka qaar iyagu waa kuwo aad muhiim u ah!Haa, waxay u dhaqmaan jihada kaa weecinaya beenta weyn isla markaana sii wad sheekada aasaasiga ah. Miyaadan weli gaarin? Sheekadan oo dhami malaha waa hawlgal cilmi nafsi (PsyOp), sida qayb ka mid ah 1, qayb ka mid ah 2 en qayb ka mid ah 3 ee maqaallada. Way fiicnaan lahayd haddii aad aqriso qodobbadaas iyo wadaaga, si aan cidina u dhihi karin:Wir haben es adeerkiis ayaa rajeeyay".
Wiil Spooky Jan, waad ogtahay in wiilkaas dib u riixay garka 5 si uu kor ugu qaado qaylo dhaan weyn oo ku saabsan "sharci darrada xorriyadda sharci darrada ah" ee uu aabihiis leeyahay, hadda wuxuu ciyaarayaa doorka gelitaanka ajandaha LGBTI khariidada. Sababta oo ah waxaan isla markiiba haysannaa mid ka mid ah mowduucyada muhiimka ah, taas oo gobolka uu ku siin doono goor dambe maskaxda waxaa lagu ridi karaa qolka si loo eego. Tusaale ahaan, haddii aad wax diidmo ah ka muujisay dacaayadaha LGBTI ee dugsiyada hoose, hadda wixii ka dambeeya waxaa kugu xidhnaan doona aabaha cirfiidka sheekadan foosha xun. Ka dib oo dhan, wuxuu ka kaxeeyey carruurtiisii ​​dugsiga oo wuxuu u haystay xiriir lab iyo dhadig ah. Tani waxay ka caddahay muuqaalkiisa muuqaal ee quruxda badan, sida uu sheegay De Telegraaf:
Way ka cadahay wacdinta Gerrit Jan van D. waxa aragtidiisu ay tahay xidhiidhka caafimaadka qaba. Marka loo eego amarkii Eebbe, ninku waa inuu xiriir la yeesho naag. Haddii aadan sidaa yeelin, markaa waxaad ku jirtaa 'jacayl wasakh ah', ka dib waxaad u taagan tahay inaad ku istaagto canqowgaaga biyaha 'bullaacadda', ayuu yidhi Van D. khudbadiisa.
Waa barnaamij xariif ah oo casriyeysan oo aan goob joog ka nahay. Aabaha Gerrit Jan (oo ah 'aabe cirfiid') wuxuu leeyahay 'aragtiyo cirfiid' oo sida muuqata wuxuu leeyahay wax ka soo horjeed. Taasna dabcan waxay kicisay wiilka Jan, oo ku riyooday inuu u baxsado Kanada (ama isagaa halkaas joogay, taasi ma cada, maxaa yeelay waxba ma cada). Muuqaalka 'PsyOp' ayaa loo habeeyay inuu aabihii doonayay inuu caruurta wax barido si heteronormatively ah isla markaana u daayo wiilka cirfiidka ah Jan inuu khaniis noqdo. Jan wuxuu doonayey inuu ka baxsado nidaamkii aabihii "John Eagle", taasi waa muuqaalka. Waxaa laga yaabaa inuu xitaa jacayl la galay qofka wax iibiya ee Ruinerwold. Badeecadaas quruxda badan ee ka caawisay inuu u yeero booliiska.
Dadka ayaa loo abaabulayaa soo bandhigida booliiska fikirka George Orwell. Dad yar oo reer Dutch ah ayaa ka soo horjeedda taas. Xaqiiqdii, qaar badan ayaa u arki doona inay hagaagsan yihiin in dadka fikirka qalloocan leh, tusaale ahaan heteronormativity (heterosexual sida caadiga ah) waa aragtida lagu xirayo xerada dib-u-waxbarasho (bixinta daryeelka GGZ). Taas awgeedna waa wax aad u wanaagsan in booliisku aysan u baahneyn warqad baaris, laakiin way imaan karaan. Aabaha Gerrit Jan ayaa lagu soo waramayaa inuu carruurtiisa ka keenay kooxda iskuulka ee guriga sababtoo ah waxay raacayaan qawaaniinta gobolka. Tani waxay u badan tahay inay muujineyso in carruurtiisa la baray LGBTI normativity mana uusan ku raacsaneyn tan. Markaa haddii mustaqbalka mustaqbalka aad u aragto wax aan habooneyn in carruurtaada dugsiga hoose ay dhageystaan ​​boqoradda jiidaysa oo u sheegta inaysan ahayn wiil ama gabadh, laakiin ay weli dooran karaan jinsigooda oo aad wax ka dhahdo taas, markaas waxaad tahay diidmo suurtagal ah. Qoyskaan cirfiidka ah ee 'PsyOp' ayaa horey u daryeelay taas.
Markaa waxaan aragnaa diyaarinta sharciga duulista, laakiin maxaa yeelay mar dambe looguma yeedho iyo sababtoo ah dadka waxaa loo keenay qaab aqbalaad ah iyada oo loo maro hawl maskaxeed, qofna kama horimaan doono soo bandhigida fikirka booliiska iyo qaababka weeraradooda.
Waxaan ka fekerayaa Holland, waxaan arkaa wabiyada balaaran oo si tartiib tartiib ah ugu wareegaya dhulal hoose oo aan xadidneyn, saf ubaxyo ah oo lama filaan ah oo taagan oo u eg sida baadad dhaadheer oo dhamaadka ah; iyo beero ballaadhan oo roob daadku ku kala firidhsan yihiin dalka oo dhan, kooxo geedo, tuulooyin, munaarado go'ay, kaniisado iyo caato ayaa si weyn loo hadal hayaa. hawadu way hooseysaa qorraxduna si tartiib tartiib ah ayay u soo galaysaa meelaha dhaadheer ee cirro leh, gobollada oo dhanna codkii Telegraaf waa la duubay lana maqlaa iyada oo aan la dhalleecayn.
Soodhawrka xiriiriya: npostart.nl, assercourant.nl
Ruinerwold Drenthe iyo qoyskiisa, howlgalka xiga ee nafsiyan (PsyOp) ee ku wajahan dowlad boolis oo dheeri ah
'The greatfake' ghost ghost 'PsyOp oo ah ka qaadista xorriyaddaada oo dhan iyo hordhaca' booliiska fikirka '(qaybta 2)
Tags: 1984, Dood, Eagle, featured, Booliska ayaa u maleynayay, booliiska ayaa mooday, George, helay, Janny Knol, John, hawlgalka, Orwell, nafsi ahaaneed, Psyop, weerar, weerarada, sharciga razzia0, sharci dejinta, Ruinerwold, reer cirfiid, hooyo cirfiid, Aabe cirfiid, wiil cirfiid, maqan
23 October 2019 ee 22: 36
Macnaha guud ee la yaab leh iyo jahwareerka
Qarsoodiga layaabka leh ee ku xeeran waxa loogu yeero dil labalaab ah? tan iyo markii tuhmanaha la qabtay
sababtoo ah helitaanka laba mayd oo dhinta Martin Luther KingLaan oo ku yaal Diemen.
Waa maxay su’aal macquul ah, maxaase loo helay cida iyo sidee? , wax walbaa waxay ku nagaadaan meelaha aan la aqoon, buuqa, muuqaalada guriga.
Waxay umuuqataa inay tahay cutub afaraad oo sabuun ah, NL waa yaryahay.
Tuhmanaha waligiis ma uusan furin albaabka meeraha iyo in ka badan iyo sababta aysan u jirin ambalaasyo, ka dib oo dhan waxaa jiray laba !!! in laga qoomameeyo kuwa dhintay, dib loo soo nooleeyay iyo daraasiin su'aalo ah ...
24 October 2019 ee 21: 42
Ah, haa waxay ahayd mar kale farriin cusub oo Telegraaf ah .. miyay isha ku hayn doonaan jadwalkayga Facebook?
Qoraalka si fiican ayaa loo isugu keenay:
(xor u ah inaad ku aqriso habka qarsoon ee biraawsarka Google Chrome)
Waxaan aaminsanahay in kala badh kaniisadda Nederland ay ku rumeysan yihiin malaa'igaha iyo jinniyada. Xaqiiqdii, balaayiin dad ah oo dunida ku nool ayaa aaminsan malaa'igaha, jinniyo ama jinniyo (sida Islaamku qabo).
Taasi waxay tiri waxaan sugeynaa baahinta xigta ee Pauw halkaas oo khabiir ku takhasusay cilmigu uu sharxi doono sida ay uga duwan yihiin fikradaha John Eagle ahaayeen!
Halkee buu Peter R. ku jiraa sheekadan? Oh haa, taasi dabcan waa loo yeeri doonaa haddii baaritaanka DNA loo sameeyo hooyada cirfiidka ah ee la helay! (laakiin taasi waa uun fikrad kusaabsan waxa uu u egyahay isku xirnaanshaha qoraalka)
Keyboarde ayaa qoray:
28 October 2019 ee 13: 39
Mid ka mid ah gunaanadkeyga ka dib markaan aqriyo maqaallada ugu dambeeyay ee degelkan:
Waa inaan dhamaanteen hubsanaa in waxyaabo kale oo ka mid ah, xuquuqahan soo socda aan laga fogeynin, sababtoo ah xuquuqahan ayaa had iyo jeer halis gelin doona dadka iyo hay'adaha raadinaya awood iyo awood dheeri ah:
- xuquuqda aad u leedahay inaad diido guri baarid la'aan amar maxkamadeed
- Xaq u lahaanshaha ikhtiyaarka waxbarashada guriga (oo ay suuragal tahay xaalado tayo gaar ah)
- xuquuqda aad u leedahay inaad diido talaalada
- Xuquuqda is-difaaca
- Xuquuqda aad u leedahay mas'uuliyiinta filimada ee xafiiska jooga illaa inta aadan ku kicin shaqadooda
28 October 2019 ee 13: 48
Laakiin waxaas oo dhan: xuquuqda aad u leedahay 'ka fikir waxa aad rabto'
Bilaabida booliska fikirka.
Bal maskaxda ku he, ninku wuxuu rumeeyey "cirfiidka". Qiyaastii bilyannada 5 ee adduunka ayaa sidaas sameeya. Masiixiyiinta ee malaa'igaha iyo jinniyada, Muslimiinta ditto iyo Masiixiyiinta wacdiyiintu waxay rumeysan yihiin in Sayidku Ruuxiisa Quduuska ah u soo diray Bentakostiga. Sidaa daraadeed waxaan leenahay fasax Whitsun.
28 October 2019 ee 15: 31
Waad ku mahadsan tahay intaa, intaas had iyo jeer way ku soo dhacdaa taas.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu ka fikiro / rumeeyo waxa isagu ama iyadu rabto, sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay inuu u dhaqmo si munaasib ah, ilaa iyo intaani aysan ku xad gudbin xuquuqda iyo xoriyada kuwa kale.
Caqliga suuban ma aha mid ku adag dadka fikirka haysta, mana aha inaad ku wada heshiisaan faahfaahinta.
28 October 2019 ee 15: 42
Oo kaliya wax ku saabsan sheyga news laftiisa, runtii waa wax lagu qoslo sida weyn / u faahfaahsan tahay warbixinta ku saabsan tan, runtiina tani waxay muujineysaa ujeedo hoose. Haddii ujeeddadan tahay in lagu madadaaliyo dadka shaqada badan saacadaha fiidkii, ama in lagu dhiirrigeliyo isbeddelada sharciga, fikrad malahan. Xaqiiqdu waxay tahay wali inaan ilaalino xuquuqdeena oo aad tan ka dacwooto waxaan qabaa inay tahay wax fiican.
28 October 2019 ee 21: 24
U eg in la xaliyay, maahan inay ahaato dadkaas adag. Si fudud u bixi oo tijaabi….
29 October 2019 ee 10: 51
Dhacdooyinka gaarka ah waayadan dambe. Maalmahan, ka dib kiiska Anne Faber, garsooraha ayaa sidoo kale helay door laba geesood ah sida cilmi-nafsi yaqaanka. Shirkadaha ganacsiga hadda waxaa loo xilsaaray labo door booliis ...
1 November 2019 ee 23: 49
Hooyo van Ruinerwold ma aasin, laakiin si qarsoodi ah ayaa loo gubey sida ay qortay Telegraaf, iyada oo loo maro
Sida laga soo xigtay telegraaf
Dheecaanka 'crematorium' wuxuu sii daayaa feyl gaar ah, maxaan markale ku qabannaa halkaas?
by. Hooyada looma aasay, laakiin sida ku xardhan kubbadda korantada ee Telegraaf.
Laguma aasin beerta laakiin waxaa lagu gubay waxa loogu yeero "faylal qaas ah".
Looma oggolaan inaanu soo baxno faahfaahin, laakiin?
2 November 2019 ee 13: 58
Dadka leh aragtida Masiixiyiinta ee nolosha badanaa muujiraan maxaa yeelay waxay aamminsan yihiin 'dib-u-soo-noqoshada'.
Laakiin way la akhriyaan tan, sidaas darteed waxay sugeysaa isbadalka soo socda ..
« 'The greatfake' ghost ghost 'PsyOp oo ah ka qaadista xorriyaddaada oo dhan iyo hordhaca' booliiska fikirka '(qaybta 2)
Weerarada argagixisada been abuurka ah ee London, Manchester, Paris, Barcelona iyo Rotterdam ee 23 iyo 24 October? (DHAMMAAN) »
Guud ahaan Wadarta: 13.756.569
Martin Vrijland op Sideed ugu qasbi kartaa dowladaha inay beddelaan iyagoo iska indho tiraya tirada guud?
Riffian op Tallaabada koowaad waa calaamadaynta, tallaabada labaad waa ka saaritaan: badhanka tallaalka
Maxaad u dooneysaa inaad tan ogaato? op Sideed ugu qasbi kartaa dowladaha inay beddelaan iyagoo iska indho tiraya tirada guud?